Ilokishi le iligugu okanye ilishwangusha? - Activate!
Ilokishi le iligugu okanye ilishwangusha?
“Mna andifundeli ukuphuma elokishini, ndifundela ukuzifaka zitshone iingcambu zam elokishini kuba kulapho lemfundo yam idingeka khona”
Liyibeke olohlobo ityendyana laseBhayi xa lalizazisa kwintlanganiso eyayibanjelwe kwidyunivesithi iNelson Mandela. Kuthe kanti lentetho yalo izakuvusa eyona yakhe yankulu ingxoxo-mphikiswani ngendima yeelokishi kweli loMzantsi Africa, nto leyo eshiye umbuzo omileyo othi iilokishi ezi ingaba zinako ukubalwa njengamagugu esizwe okanye zilishwangusha?
Iilokishi kweli zabethelelwa ngurhulumente wengcinezelo ngemithetho eliqela equka iGroup Areas Act ka1950, eyamisela ukuba ukuhlala kwabebemi belizwe kwahlulwa-hlulwe ngokobuhlanga, abantu abantsundu bamiselwa iilokishi, ze bonke abo ababengaphandle kwalomida yamiselwa ngulomthetho badudulwa ngenkani bayakulahlwa ezilokishini, lombali yokududulwa iye yaduma kakhulu kwindawo ezazifana neeDistrict sSix kunye neSophiatown ezadilizwayo ngurhulumente. Injongo yokumiselwa kwazo yayikuqinisekisa ukuba abantu abantsundu balahlelwa kude nemithombo yoqoqosho ukuze bakwazi ukulawulwa ngemithetho engqingqwa engenanceba. Ngenxa yalemithetho yangabom iilokishi zaba ziindawo ezingehoyekanga ezibhuqwa yindlala, ezingenamisebenzi nezizele lulwaphulo mthetho.
Umbuzo ke ngulo; njengokuba singena kwinyanga yomsintsi nje, noyinyanga yamagugu nenkcubeko iindawo ezinesisekelo esibuhlungu ezifana neseelokishi zinako yhini na ukubizwa njengamagugu esizwe? uOlwam Mnqwazi nongumphathi weBlack Hat Leadership Academy ebhayi ukhabe ngawo omane ngelithi iilokishi ezi azinako uba ligugu lesizwe kuba azimiselwanga sisizwe, koko zanyanzeliswa esizweni. Ukwathi nokwakhiwa kwazo kwakungekho njongo yokuba zibe ligugu, zazimiselwe ukucinezela, ngenxa yalonto ukuzibiza njengegugu kukusilahlekisa isizwe, kuba igugu yinto esekelwe kwinqubela phambili nesakhayo iphinde isiphucule isizwe. OkaMnqwazi ulebele ngelithi “lisikizi into yokubiza ilokishi esisiphumo zokuhlaliswa ngocalucalulo (spartial planning) njengekhaya, phofu xa sililibele ikhaya yonke indawo iba likhaya”.
Ityendyana liyiphikisile lentetho ngelithi iilokishi zililo igugu lesizwe, kuba zivelise inkcubeko engummangaliso kwelilizwe; xa sizibona njengeshwangushwa yintoni esizakuyizuza kulonto thina bantu bahlala kuzo? Ewe iilokishi zamiselwa ngenjongo ezazingalunganga, ngurhulumente owayengalunganga kodwa lonto ayithethi ukuba abantu ababakuzo nabo mababambelele kulongcingane. Amagama abantu abazithiya wona iilokishi zabo ayabonisa ukuba babengahambisani ncam neenjongo zikarhulumente wobandlululo kunjalo nje babenethemba lokuba iyakuba ziindawo eziya kuba nekamva, iiGugulethu, ooZwelethemba, ooKhayelitsha, eThembeni, kwaNoxolo, eZibeleni njalo-njalo. Kuyabonakala ukuba uninzi lwabantu abaphikisa iphulo lokubalula iilokishi njengegugu lesizwe asingobantu abahlala kuzo iilokishi, okukugxekwa kweelokishi bakwenza beme qelele benga bakhi-mkhanyo kunjalo nje bethe gcobho ebhotolweni.
Nokuba zithini izimvo ezahlukeneyo zabantu ngeendima yeelokishi, ukungahoyeki kwazo isengu mba otshisa ibunzi, ukuba kude kwazo kwiingingqi zempangelo kunye nendawo zoqoqosho. Ukuphuculwa kweelokishi akuphelelanga ekubeni kwakhiwe udederhu lweevenkile babe abantu abahlala kuzo bengafumani zinkonzo, kunjalonje kungabonakali nentshukumo yokuba basondezwe kumaziko oqoqosho. Urhulumente naye ngokwakhe unendima ebalulekileyo ekumele ayidlale ekuqinisekiseni ukuba abantu abahlala ezilokishini banganeli ukusondezwa kumaziko oqoqosho kodwa kuphuculwe amaziko akhoyo phakathi ezilokishini. Ewe urhulumente uzakhile izindlu kodwa kukho umahluko omkhulu phakathi kokwakha izindlu nokwakha amakhaya. Ukuba iilokishi zibaligugu nokuba ziba lishwangusha yonke lonto ixhomekeke kuthi kodwa umqweno wokuba zibe ligugu ngaphezu kokuba zibe lishwangusha.
Ilwimi zethu mazingafuyi ingcinezelo
By Prince Charles “Ibubuwexu-wexu obuphinda phindeneyo into yokunyathelela phantsi amalungelo nezidima zabanye abantu ngelithi silwela eyethu inkululeko” -Sanele Ntshingana Umhla wama24 kwinyanga yoMsintsi ngumhla…
Ingxelo Ngemeko Yelizwe
test test	2015-02-13